Rohingya Students Forum: ‘Gya E’ Poem with English Translation
မုန့်လုံး စက္ကူ ကပ်ပါလို့
ကိုလူပျိူထရံပေါက်က
မိုးတောင်ကချူ န်း မုန့်လုံး။ ။
ကျွန်တော်တို့ ငယ်ငယ်တုန်းက ဘာမှန်းမသိ ဆိုခဲ့တဲ့ ကဗျာလေး။ အခုတော့ ဆရာတစ်ယောက်ရဲ့ အကူအညီနဲ့ ဘာမှန်း မသိခဲ့တဲ့ ... "ဂျာအေး"အကြောင်းသိခဲ့ရပါပြီ။ ဆရာ ပို့ပေးထားတာတွေ ကို မူရင်းအတိုင်း ပြန်မျှဝေပါရစေ။ ပထမတန်း၊ မြန်မာစာတွင် "ဂျာအေး"ဟူ၍ စာလုံးပေါင်းပါသည်။
ယခုဖော်ပြလိုက်သော"ဂြာဧ"ကဗျာကို ၁၉၆၀ပြည့်နှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံ သုတေသနအသင်းက ထုတ်ဝေသော Fiftieth Anniversary Publications No.2စာစောင်မှ J. A. Stewart ပြုစု ရေးသားသော "Some Songs andaRiddle" ဆောင်းပါးမှ ကူးယူပါသည်။ အဆုံးမရှိသဖြင့် "Endless Song"ဟူ၍ အမည်ပေးထားသည်။ သုတေသီ အချိူ့က ... ပတ်လည်သီချင်းဟု ခေါ်တွင်စေပါသည်။ ကိုလူပျိူနှင့် မဂျာအေးတို့၏ ရယ်စရာ အဖြစ်အပျက်ကလေးပင် ဖြစ်ပါသည်။
အဆုံးအစမရှိ၊ အတော်မသတ်ဖြစ်နေလျှင် "မုန့်လုံးစက္ကူ ကပ်"ဖြစ်နေပြီဟု ဆိုစမှတ်ရှိလေသည်။
"ဂျာအေး"ကဗျာလေးကို အနောက်တိုင်းပညာရှင် ဆရာကြီး J. A. Stewart သည် အင်္ဂလိပ်ဘာသာသို့ ဘာသာပြန်ဆိုပုံမှာ နှစ်သက်အတုယူစရာ ကောင်းလှပါသည်။
ဂြာဧ (ဂျာဧ)
because her mother beat her,
Was crying in the darkness.
Mister Bachelor fromahole in the wall,
Pulled her leg ,Hanging down.
Hanging down. Waitabit.
It thundered in the south.
A bun with paper sticking to it
Was put on the lily salver as an offering,
From above the shrine the little monkey
Came running down,Gya E.
ဂျာအေးကို သူ့အမေ ရိုက်ပါလို့
မုန့်လုံးကို စက္ကူကပ်ပါလို့ - မုန့်လုံးနဲ့ တူတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ခန္ဓာငါးပါး သက္ကာယတရားတွေကို တဏှာ ဒိဋ္ဌိတွေနဲ့ စွဲကပ်ထားပါတယ်..
ကြာကလပ်နဲ့ ဆွမ်းတော်တင် - နတ်ချမ်းသာ ဗြဟ္မာချမ်းသာတွေကို ရည်စူးပြီး ကုသိုလ် ကောင်းမှုတွေ ပြုလုပ်ကြပါတယ်။
ပလ္လင်ပေါ်က မျောက်ကလေး ဆင်းတယ်လို့ပြေး ဂျာအေး - ကောင်းမှုတွေ လုပ်လို့ ကောင်းရာ ဘုံဘဝတွေ ရောက်ပေမယ့်လည်း (မုန့်လုံးကို စက္ကူကပ်ပြီး လှူသလို တဏှာလောဘနဲ့ လုပ်တဲ့ ကုသိုလ်တွေ ဖြစ်လေတော့) အချိန်တန်လို့ ကုသိုလ် အဟုန်တွေ ကုန်တော့ အပါယ်ဘုံ (သို့) လူ့ဘုံကိုပဲ ရောက်ရတာပါပဲ..
ဂျာအေးကို သူ့အမေရိုက်ပါလို့ မှောင်မိုက်မှာငို - ကံတရားရဲ့ အကျိုးပေးကြောင့် လူဘုံကို ရောက်တဲ့ အချိန်မှာလဲ အမှောင်နဲ့တူတဲ့ အဝိဇ္ဇာတွေကြားထဲမှာ ဒုက္ခသစ္စာနဲ့ ကြုံပြန်တော့ ပူဆွေးရပြန်ပါတယ်..
ကိုလူပျို ထရံပေါက်က ခြေထောက်ကိုဆွဲ တွဲလွဲ - ကံကောင်းစွာနဲ့ပဲ ကျွန်တော်တို့ဟာ သာသနာနဲ့ ကြုံကြိုက်လို့ ဓမ္မအလင်းရောင်နဲ့ တွေ့ပြီး အမှောင်ထဲက လွတ်မဲ့ လမ်းစ မြင်လာရပါတယ်
မိုးတောင်ကချုန်း မုန့်လုံး - သာသနာတော်နဲ့ ကြုံပေမယ့် အဖျက်အမှောင့်တွေကြောင့် အားမထုတ်နိုင်ခဲ့ရင်ဖြင့် မုန့်လုံးဘဝသို့ ပြန်လည် ရောက်ရှိသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်...
မုန့်လုံးဘဝကို ရောက်ရှိရင်ဖြင့် မဆုံးနိုင်တဲ့ သံသရာကို ဘယ်နှကြိမ်မှန်း မသိဘဲ အထပ်ထပ် ပြန်ကျော့နေရဦးမှာ ဖြစ်ပါတော့တယ်..
“မသိတော့ပြုလုပ်၊ ပြုလုပ်တော့ရရှိ၊ ရရှိတော့ခံစား၊ ခံစားတော့လိုချင်၊ လိုချင်တော့စွဲလမ်း၊ စွဲလမ်းတော့ပြုလုပ်နဲ့ ဘဝသံသရာ ဝဲဂယက်ထဲ မဆုံးနိုင်အောင် အထပ်ထပ် လည်ပတ်နေရပုံ”ကို
ရေးဖွဲ့ထားတဲ့ သံဝေဂရစရာ ကဗျာလေးတစ်ပုဒ် ဖြစ်ပါတယ်..
ဆိုလိုရင်းကို နားလည်သလို အနီးစပ်ဆုံး ပြန်ထားတာမို့ မူရင်း အဓိပ္ပါယ်နဲ့ တိကျစွာ တူချင်မှ တူမှာမို့ နာလည်သူများက ပြင်ဆင်ပေးကြပါဦး...
Ref ; ဆရာမောင်သိန်းလွင်၏ ကျွန်တော်နှစ်သက်သောကဗျာများ
credit : Aung_Thiha
copy : Win Min Tun's comment on Daw Sein Sein Htay's post
Posted by Rohang king at 11:32 AM
Labels: literature, poem, ပညာရေး, သုတ